Panda Gyi, Author at Yangon News
Author: Panda Gyi
နာမည်ကြီး မိတ်ကပ် အနုပညာရှင် တယောက်ဖြစ်တဲ့ သုသု ကိုတော့ လူတော်တော်များများ သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ သုသု ကတော့ မိတ်ကပ်ပညာရှင် တယောက် ဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိမှာတော့ အနုပညာ လှုပ်ငန်းတွေလည်း လုပ်ကိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သုသုရဲ့ ဟာသ ဗီဒီယိုလေးတွေကလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အပြည့်အဝ ရရှိထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
ညီညီမောင် စမ်းချောင်းကတော့ အမြဲတမ်းပရိသတ်တွေကို ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အရာတွေကို တင်ဆက်ပေးနေပြီး ယခုနောက်ပိုင်းမှာ ဆိုရင်တော့ သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကိုပါ လုပ်ကိုင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူပါဝင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကလည်း အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိကို အောင်မြင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သုသု တစ်ယောက်ကတော့ လက်ရှိမှာလည်း အတည်ပေါက်ကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ အံ့ဩသွားစေလောက်တဲ့ အရာတစ်ခုကို လုပ်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ ဒါကတော့ သုသု တစ်ယောက် မင်္ဂလာ ဝတ်စုံကြီးဝတ်ပြီး မင်္ဂလာပွဲရက်ရွေ့လိုက်ပါပြီနော် ဆိုပြီးတော့ စာသားလေးကိုလည်း တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သုသုတစ်ယောက်ကတော့ အမြဲတမ်း ပရိသတ်တွေကို ဖောက်နေကြဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာလည်း သုသု တစ်ယောက်အတည်ပြောတာလား ဖောက်နေတာလား ဆိုတာကတော့ စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါပြီ။ ပြောချင်လွန်းလို့ ပရိသတ်ကြီး အနေနဲ့လည်း သုသု တစ်ယောက်ရဲ့ စကားအပေါ် ဘယ်လိုမြင်ကြလဲဗျ။
နာမညျကွီး မိတျကပျ အနုပညာရှငျ တယောကျဖွဈတဲ့ သုသု ကိုတော့ လူတျောတျောမြားမြား သိကွမယျ ထငျပါတယျ။ သုသု ကတော့ မိတျကပျပညာရှငျ တယောကျ ဖွဈသျောလညျး လကျရှိမှာတော့ အနုပညာ လှုပျငနျးတှလေညျး လုပျကိုငျနပွေီ ဖွဈပါတယျ။ သုသုရဲ့ ဟာသ ဗီဒီယိုလေးတှကေလညျး ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို အပွညျ့အဝ ရရှိထားပွီးသား ဖွဈပါတယျ။
ညီညီမောငျ စမျးခြောငျးကတော့ အမွဲတမျးပရိသတျတှကေို ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ အရာတှကေို တငျဆကျပေးနပွေီး ယခုနောကျပိုငျးမှာ ဆိုရငျတော့ သရုပျဆောငျအလုပျကိုပါ လုပျကိုငျလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။ သူပါဝငျထားတဲ့ ရုပျရှငျကားတှကေလညျး အတိုငျးအတာ တဈခုအထိကို အောငျမွငျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။
သုသု တဈယောကျကတော့ လကျရှိမှာလညျး အတညျပေါကျကွီးနဲ့ ပရိသတျတှေ အံ့ဩသှားစလေောကျတဲ့ အရာတဈခုကို လုပျလိုကျပွနျပါပွီ။ ဒါကတော့ သုသု တဈယောကျ မင်ျဂလာ ဝတျစုံကွီးဝတျပွီး မင်ျဂလာပှဲရကျရှလေို့ကျပါပွီနျော ဆိုပွီးတော့ စာသားလေးကိုလညျး တငျထားတာ ဖွဈပါတယျ။
သုသုတဈယောကျကတော့ အမွဲတမျး ပရိသတျတှကေို ဖောကျနကွေဖွဈပွီး လကျရှိမှာလညျး သုသု တဈယောကျအတညျပွောတာလား ဖောကျနတောလား ဆိုတာကတော့ စဉျးစားစရာဖွဈလာပါပွီ။ ပွောခငျြလှနျးလို့ ပရိသတျကွီး အနနေဲ့လညျး သုသု တဈယောကျရဲ့ စကားအပျေါ ဘယျလိုမွငျကွလဲဗြ။
လူချစ်လူခင်ပေါများတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ယုန်လေးကတော့ အမြဲတမ်းလိုလို သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က အသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့ သူ့ပရိသတ်တွေကို အမြဲတမ်းလိုလို ပျော်ရွှင်အောင် ပြုလုပ်ပေးနေကြ ဖြစ်ပါတယ်။ ယုန်လေးတစ်ယောက်ကတော့ အနုပညာလောကထဲကို အဆိုတော် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဝင်ရောက်လာသော်လည်း လက်ရှိမှာတော့ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အနေနဲ့ရော သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ လုပ်ကိုင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာလည်း ယုန်လေးတစ်ယောက်ကတော့ သူ့ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်မှာ သုံးပွင့်ဆိုင် အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးအကြောင်းကို ပရိသတ်တွေအတွက် စဉ်းစားရအောင် စာသားလေးကို တင်ထားပြီး “ကိုယ်ပစ်ထားတာလဲ အချိန်တွေကြာသွားတာကို . ကိုယ်အမှားပဲလေ အခု မှ ကျတော့ ပိုင်ရှင်ရှိသွားပြီတဲ့ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ နားလည်မူ ယူလိုက်ရတာပေါ့ ကျွန်တော်တို့ ၃ယောက်ပုံလေး နောက် ၁၀ မိနစ် ဆိုရင်တင်ပေးမယ်နော်” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုရေးသားပြီး ခဏအကြာမှာတော့ ယုန်လေးက ပွင့်နဲ့ အားတီရယ် သူရယ် သုံးယောက်သား ပုံလေးကို တင်လိုက်ပြီး ပရိသတ်တွေကို ပျော်ရွှင်စေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယုန်လေးကတော့ အဲ့ပုံလေး တင်ပြီးတော့ “အရမ်းချစ်တော့လည်း နှစ်ယောက်တွဲ လည်း လက်ခံရတာပေါ့” ဆိုပြီး တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယုန်လေး တစ်ယောက်ကတော့ အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းမှာတင်ကို လူချစ်လူခင် ပေါများတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို ယခုနောက်ပိုင်း သူဒါရိုက်တာ လုပ်ပီးရိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေကလည်း ပရိသတ်တွေကြားမှာ အောင်မြင်နေတာ ဖြစ်ပြီး အားပေးဝန်းရံမှုတွေကိုလည်း ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူခဈြလူခငျပေါမြားတဲ့ အနုပညာရှငျ တဈယောကျဖွဈတဲ့ ယုနျလေးကတော့ အမွဲတမျးလိုလို သူ့ပတျဝနျးကငျြက အသိမိတျဆှတှေနေဲ့ သူ့ပရိသတျတှကေို အမွဲတမျးလိုလို ပြျောရှငျအောငျ ပွုလုပျပေးနကွေ ဖွဈပါတယျ။ ယုနျလေးတဈယောကျကတော့ အနုပညာလောကထဲကို အဆိုတျော တဈယောကျအနနေဲ့ ဝငျရောကျလာသျောလညျး လကျရှိမှာတော့ ဒါရိုကျတာတဈယောကျအနနေဲ့ရော သရုပျဆောငျ တဈယောကျအနနေဲ့ပါ လုပျကိုငျနတော ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာလညျး ယုနျလေးတဈယောကျကတော့ သူ့ရဲ့ ဖဘေု့တျအကောငျ့မှာ သုံးပှငျ့ဆိုငျ အခဈြဇာတျလမျးလေးအကွောငျးကို ပရိသတျတှအေတှကျ စဉျးစားရအောငျ စာသားလေးကို တငျထားပွီး “ကိုယျပဈထားတာလဲ အခြိနျတှကွောသှားတာကို . ကိုယျအမှားပဲလေ အခု မှ ကတြော့ ပိုငျရှငျရှိသှားပွီတဲ့ ဘယျတတျနိုငျမလဲ နားလညျမူ ယူလိုကျရတာပေါ့ ကြှနျတျောတို့ ၃ယောကျပုံလေး နောကျ ၁၀ မိနဈ ဆိုရငျတငျပေးမယျနျော” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုရေးသားပွီး ခဏအကွာမှာတော့ ယုနျလေးက ပှငျ့နဲ့ အားတီရယျ သူရယျ သုံးယောကျသား ပုံလေးကို တငျလိုကျပွီး ပရိသတျတှကေို ပြျောရှငျစခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ယုနျလေးကတော့ အဲ့ပုံလေး တငျပွီးတော့ “အရမျးခဈြတော့လညျး နှဈယောကျတှဲ လညျး လကျခံရတာပေါ့” ဆိုပွီး တငျထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ယုနျလေး တဈယောကျကတော့ အနုပညာအသိုငျးအဝိုငျးမှာတငျကို လူခဈြလူခငျ ပေါမြားတဲ့ သူတဈယောကျဖွဈသလို ယခုနောကျပိုငျး သူဒါရိုကျတာ လုပျပီးရိုကျတဲ့ ဇာတျကားတှကေလညျး ပရိသတျတှကွေားမှာ အောငျမွငျနတော ဖွဈပွီး အားပေးဝနျးရံမှုတှကေိုလညျး ရရှိထားတာ ဖွဈပါတယျ။မွနျမာလိုလေးပဲ ဝတျပါမယျတဲ့
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးသော အမျိုးသမီး အဆိုတော်တွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် ပိုပိုကတော့ လက်ရှိမှာ သူမထွက်တဲ့ သီချင်းတိုင်းဟာ အောင်မြင်မှု ရယူထားပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ဆက်တိုက် ရရှိနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပိုကတော့ တလောတုန်းကလည်း တစ်ကိုယ်တော်ရှိုးလုပ်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို ရယူထားနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုပိုကတော့ သူ့အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို အမြဲတမ်းလိုလို ဖျော်ဖြေမှုပေးနေပြီး သူ့ရဲ့ ဘဝအကြောင်းကိုလည်း ပရိသတ်တွေကို အမြဲတမ်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြပေးနေကြ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပိုတစ်ယောက်ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်သလို တစ်ဖက်မှာလည်း အလှူအတန်းတွေကို အဆက်မပြတ်လုပ်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုပိုကတော့ သူ့ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်မှာတော့ ” လှူဒါန်းတယ်ဆိုတာ က မြန်မာ တို့ရဲ့ ချစ်စရာ ဓလေ့ အဲ့တော့ မြန်မာ ဆန်ဆန်လေး ဝတ်ရတာလဲ ချစ်စရာလေးပါ” ဆိုပြီးတော့ တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင့်ပိုပို ကတော့ မောင်က ဒီလိုလေး ဝတ်ရင် ပိုချစ်မယ်ဆိုလို့ ဆိုပြီး မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ ပုံလေးတွေကိုလည်း တင်ထားပါသေးတယ်။
ပိုပိုကတေ့ာ အလှူအတန်းတွေ ပြုတယ်ဆိုတာ မြန်မာတို့ ရိုးရာဖြစ်ပြီး မြန်မာဆန်ဆန်လေး ဝတ်ရတာကလည်း ချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပိုပိုတစ်ယောက်ကတော့ သူ့ရဲ့‌‌မောင်က ဒီလိုလေးဝတ်ရင် ပိုချစ်မှာပါတဲ့။ ပြောချင်လွန်းလို့ ပရိသတ်ကြီးရော ပိုပို တစ်ယောက်ရဲ့ မောင်ကိုတော့ စိတ်ဝင်စားနေကြပြီမလား။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အအောငျမွငျဆုံးသော အမြိုးသမီး အဆိုတျောတှထေဲက တဈယောကျဖွဈတဲ့ အဆိုတျော ပိုပိုကတော့ လကျရှိမှာ သူမထှကျတဲ့ သီခငျြးတိုငျးဟာ အောငျမွငျမှု ရယူထားပွီး အောငျမွငျမှုတှေ ဆကျတိုကျ ရရှိနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ ပိုပိုကတော့ တလောတုနျးကလညျး တဈကိုယျတျောရှိုးလုပျခဲ့ပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြကို ရယူထားနိုငျတာ ဖွဈပါတယျ။
ပိုပိုကတော့ သူ့အနနေဲ့ ပရိသတျတှကေို အမွဲတမျးလိုလို ဖြျောဖွမှေုပေးနပွေီး သူ့ရဲ့ ဘဝအကွောငျးကိုလညျး ပရိသတျတှကေို အမွဲတမျး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောပွပေးနကွေ ဖွဈပါတယျ။ ပိုပိုတဈယောကျကတော့ အနုပညာအလုပျတှကေို လုပျသလို တဈဖကျမှာလညျး အလှူအတနျးတှကေို အဆကျမပွတျလုပျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒီအကွောငျးလေးနဲ့ ပတျသကျပွီး ပိုပိုကတော့ သူ့ရဲ့ ဖဘေု့တျအကောငျ့မှာတော့ ” လှူဒါနျးတယျဆိုတာ က မွနျမာ တို့ရဲ့ ခဈြစရာ ဓလေ့ အဲ့တော့ မွနျမာ ဆနျဆနျလေး ဝတျရတာလဲ ခဈြစရာလေးပါ” ဆိုပွီးတော့ တငျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါအပွငျ့ပိုပို ကတော့ မောငျက ဒီလိုလေး ဝတျရငျ ပိုခဈြမယျဆိုလို့ ဆိုပွီး မွနျမာဝတျစုံနဲ့ ပုံလေးတှကေိုလညျး တငျထားပါသေးတယျ။
ပိုပိုကတေ့ာ အလှူအတနျးတှေ ပွုတယျဆိုတာ မွနျမာတို့ ရိုးရာဖွဈပွီး မွနျမာဆနျဆနျလေး ဝတျရတာကလညျး ခဈြစရာကောငျးပါတယျဆိုပွီးတော့ ပွောထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ပွီးတော့ ပိုပိုတဈယောကျကတော့ သူ့ရဲ့‌‌မောငျက ဒီလိုလေးဝတျရငျ ပိုခဈြမှာပါတဲ့။ ပွောခငျြလှနျးလို့ ပရိသတျကွီးရော ပိုပို တဈယောကျရဲ့ မောငျကိုတော့ စိတျဝငျစားနကွေပွီမလား။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်လောက်ကတည်းက ပရိသတ် အခိုက်အမာ ရရှိထားပြီး အရမ်းကောင်းတဲ့ စာသားတွေနဲ့ တမူထူးခြားတဲ့သီဆိုဖျော်ဖြေဟန်တွေနဲ့ နာမည်ရလာတဲ့ အဆ်ုတော် လွမ်းပိုင်ကိုတော့ တော်တော်များများ သိကြမှာပါ။ အဆိုတော် လွမ်းပိုင်ကတော့ ယခုနောက်ပိုင်းမှာ သီချင်းဆိုတဲ့ အလုပ်အပြင် သရုပ်ဆောင်ပိုင်းပါ လုပ်ကိုင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ယခုနောက်ပိုင်းမှာ ဆိုရင်လည်း online မှာ Game တွေကို Stream ပြရင်း လူပိုသိလာတတဲ့ အနုပညာရှင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အဖက်ဖက်မှာ လူသိတဲ့ အဆိုတော် လွမ်းပိုင်တစ်ယောက်ကတော့ သူ့အနေနဲ့ လက်ရှိမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကျန်းမာရေး အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် သတိပေးတဲ့အရာတစ်ခုကို လုပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် လက်တလောပွဲတွေကို မဖျော်ဖြေပေးနိုင်ဘူးဆ်ုတဲ့ လွမ်းပိုင်
လွမ်းပိုင်ကတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘုတ်အကောင့်မှာတော့ “ဗန်းမော်မှာဖျော်ဖြေပွဲက ဘာလို့လုပ်လို့ရနေသေးတာလဲ ဒီလောက်တလောကလုံး Lock Down တွေလုပ်နေတာတောင် မြန်မာပြည်မှာကတော့ပွဲပါမစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ လာကြည့်မဲ့ပရိတ်သတ်တွေ ဖျော်ဖြေမဲ့ သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေး|အသက်အန္တရယ်နဲ့ လဲလှယ်ပေးရမလား ကျွှန်တော်တော့ ကျွှန်တော့်ပရိတ်သတ်အတွက်အဆိပ်ခပ်မဲ့သူ မဖြစ်လိုပါဒါကြောင့်ဗန်းမော်မှာ ဖျော်ဖြေပွဲကိုကျွှန်တော်လာရောက်မဖျော်ဖြေနိုင်ပါ။
စရံပြန်ပေးပါမည်(သို့မဟုတ်)အစိုးရကပွဲကျင်းပ ခွင့်ပြုသည်ဟုကြေငြာပြီးနောက် ကြိုက်တဲ့ရက်ပွဲလုပ် ပါပြန်ဆိုပေးပါမည်)ယခုတော့မဆိုနိုင်ပါ။ မဖြစ်ခင်ကြိုတင်ကာကွယ်ပါတာဝန်ရှိသူများတာဝန်အပြည့်ယူကြပါ။ မြန်မာပြည်ကြီးအေးချမ်းပါစေလို့ဆုတောင်း ရင်း” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လွမ်းပိုင်ကတော့ သူ့ပရိသတ်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် သူ့ကိုငှားထားတဲ့ပွဲတွေကို လက်တလော မဖျော်ဖြေပေး‌နိင်သေးဘူးလို့ ပြောကြားသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လှနျခဲ့တဲ့ ဆယျစုနှဈလောကျကတညျးက ပရိသတျ အခိုကျအမာ ရရှိထားပွီး အရမျးကောငျးတဲ့ စာသားတှနေဲ့ တမူထူးခွားတဲ့သီဆိုဖြျောဖွဟေနျတှနေဲ့ နာမညျရလာတဲ့ အဆျုတျော လှမျးပိုငျကိုတော့ တျောတျောမြားမြား သိကွမှာပါ။ အဆိုတျော လှမျးပိုငျကတော့ ယခုနောကျပိုငျးမှာ သီခငျြးဆိုတဲ့ အလုပျအပွငျ သရုပျဆောငျပိုငျးပါ လုပျကိုငျလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျယခုနောကျပိုငျးမှာ ဆိုရငျလညျး online မှာ Game တှကေို Stream ပွရငျး လူပိုသိလာတတဲ့ အနုပညာရှငျ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး အဖကျဖကျမှာ လူသိတဲ့ အဆိုတျော လှမျးပိုငျတဈယောကျကတော့ သူ့အနနေဲ့ လကျရှိမှာ ဖွဈပှားနတေဲ့ကနျြးမာရေး အခွအေနနေဲ့ပတျသကျပွီး ပရိသတျတှအေတှကျ သတိပေးတဲ့အရာတဈခုကို လုပျလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
လှမျးပိုငျကတော့ သူ့ရဲ့ဖဘေု့တျအကောငျ့မှာတော့ “ဗနျးမျောမှာဖြျောဖွပှေဲက ဘာလို့လုပျလို့ရနသေေးတာလဲ ဒီလောကျတလောကလုံး Lock Down တှလေုပျနတောတောငျ မွနျမာပွညျမှာကတော့ပှဲပါမဈရတယျဆိုတဲ့ဟာနဲ့ လာကွညျ့မဲ့ပရိတျသတျတှေ ဖြျောဖွမေဲ့ သူတှရေဲ့ကနျြးမာရေး|အသကျအန်တရယျနဲ့ လဲလှယျပေးရမလား ကြှနျတျောတော့ ကြှနျတေျာ့ပရိတျသတျအတှကျအဆိပျခပျမဲ့သူ မဖွဈလိုပါဒါကွောငျ့ဗနျးမျောမှာ ဖြျောဖွပှေဲကိုကြှနျတျောလာရောကျမဖြျောဖွနေိုငျပါ။
စရံပွနျပေးပါမညျ(သို့မဟုတျ)အစိုးရကပှဲကငျြးပ ခှငျ့ပွုသညျဟုကွငွောပွီးနောကျ ကွိုကျတဲ့ရကျပှဲလုပျ ပါပွနျဆိုပေးပါမညျ)ယခုတော့မဆိုနိုငျပါ။ မဖွဈခငျကွိုတငျကာကှယျပါတာဝနျရှိသူမြားတာဝနျအပွညျ့ယူကွပါ။ မွနျမာပွညျကွီးအေးခမျြးပါစလေို့ဆုတောငျး ရငျး” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ။ လှမျးပိုငျကတော့ သူ့ပရိသတျတှရေဲ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ သူ့ကိုငှားထားတဲ့ပှဲတှကေို လကျတလော မဖြျောဖွပေေး‌နိငျသေးဘူးလို့ ပွောကွားသှားတာ ဖွဈပါတယျ။